DAAWO VIDEO: Sheekh Daaci reer Falastiin ah oo geerida u timid isaga oo leh ‘Laa Ilaaha Illalaah‘ | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Sheekh Daaci reer Falastiin ah oo geerida u timid isaga...
DAAWO VIDEO: Sheekh Daaci reer Falastiin ah oo geerida u timid isaga oo leh ‘Laa Ilaaha Illalaah‘
Kuwait (Halqaran.com) – Sheekhii Daaciga ahaa ee reer Falastiin Al-Xaaji Maxmuud Cabdul Baaqi (Abuu Khadaab) ayaa si lama filaan ah dalka Kuwait ugu geeriyooday xilli uu khudbad ka jeedinayey xaflad Aroos ah. waxayna da’diisu aheyd 83 sano.
Muuqaal muujinaya daqiiqadda ay nafta ka baxeysay Sheekhii Daaciga ahaa ayaa si weyn loogu faafiyay baraha Bulshada xilli uu ku dhawaaqayey kalmadda ‘Laa Ilaaha Ilalaah‘ ka hor inta uusan neefsan neeftii ugu dambeysay ee noloshiisa.
Sheekha ayaa dhintay xilli uu khudbad diini ah u jeedinayey koox dhallinyaro ah oo ka qeyb galeysay Xafladda Arooska, wuxuuna kula dardaaramayey inay dhallinyarada noloshooda dhan walba uga daydaan Rasuulkeena Muxamed Naxariis iyo Nabadgalyo korkiisa ha ahaatee.
Sheekha ayaa marayey gabagabada wacdigiisa, wuxuuna kusoo xirayey Kalimada ‘Laa Ilaaha Illalahaa‘ wuxuuna markaas kadib qaatay neeftii ugu dambeysay noloshiisa, sidaasi ayuuna ku dhintay. Allaha U Naxariisto Sheekha.
Halka hoose ka daawo Muuqaalka Sheekhii Daaciga ahaa isagoo khudbeynaya geeriyooday:
Al-Xaaji Maxmuud Cabdul Baaqi (Abuu Khadaab)
Daaci reer Falastiin ah oo geerida u timid isaga oo leh
Laa Ilaaha Illalaah